Furayaasha sagxada, Warshadeeyayaasha siigada, Boodhka sagxada - Ares
Taxanaha ololka ee wax shiidiyaasha sagxadaha hoos yimaada astaanta Ares waxay noqdeen mishiinka la door biday ee goobta shiididda dhulka iyo dhalaalka shubka ah.
Wax ka badan ka ogow
Taxanaha duufaanka ee xoqida sagxadaha ee hoos yimaada astaanta Ares waxay ku habboon yihiin nadiifinta iyo ilaalinta resin epoxy, rinjiga, terrazzo, emery, dhoobada dhoobada, marmar iyo dabaqyo kale oo siman. Nadiifinta, qalajinta iyo jeermiska jeermiska ayaa la samayn karaa hal mar.
Taxanaha Thunder ee boorsada warshadaha ee hoos yimaada astaanta Ares ma aha oo kaliya inay yareeyaan siigada hawada iyo walxaha qayb ka ah laakiin sidoo kale waxay siin karaan jawi shaqo oo nadiif ah.
raadinta tayada ugu fiican
Ares Floor Systems waa astaan ​​heersare ah oo ay iska leedahay Shanghai Jiansong waana shirkad tignoolajiyadeed si degdeg ah u fidaysa oo soo saarta oo horumarisa alaabta wax lagu farsameeyo oogada. Warshadu waxay dabooshaa: Furimaha Dagaalka, nadiifiyaha faakuumka warshadaha, nadiifiyaha sagxada, gaadhi xaaqaya, agabka iyo alaabta iyo 11 kale oo taxane ah oo ku dhaw 100 alaab.
Shanghai Jiansong waa shirkad awood leh oo hormuud ka ah berrinkii nidaamka dhulka.
Taxanaha ololka ee wax shiidiyaasha dhulka hoostiisa Ares ...
Taxanaha Thunder ee boodhka ururiyaha warshadaha...
Taxanaha Ololka ee polisher dabaqa hoostiisa Ares ...
Taxanaha duufaanka ee xoqida dabaqyada hoostiisa Ares ...
Iyada oo leh adeeg heerkiisu sarreeyo iyo suuqa ugu wanaagsan uguna cusub, xalal dhammaystiran,
waxaanu siinaa macaamiisheena aduunka dacaladiisa hab fudud, deegaan saaxiibtinimo iyo faa'iido leh si ay u fuliyaan hawl maalmeedkooda.
Baabuurka shaambada faaruqinta, Soo saarista Kuraasta Baabuurka, Furimaha Dagaalka Dabaqa, Mashiin wax shiida flat, Mishiinka Shiida Geedaha, Mashiinka Waxshiidka Xawaaraha Sare,